DHAGEYSO:Guddiga ilaalinta qoondada haweenka oo walaac muujiyay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Guddiga ilaalinta qoondada haweenka oo walaac muujiyay
DHAGEYSO:Guddiga ilaalinta qoondada haweenka oo walaac muujiyay
Guddiga uu Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamad Xuseen Rooble u magacaabay u ololeynta iyo xaqiijinta qoondada haweenka ugu yaraan 30 boqolkiiba ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay inay Maamul Goboleedyada ilaalinayaan Qoondada Haweenka ee Baarlamaanka labadiisa Aqal.
Gudoomiyaha Guddigaan ahna Guddoomiyaha Haweenka Qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gabale ayaa sheegtay inay walaac xooggan ka qabaan waxa ka socda Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG Maamulka Jubbaland maadaama shaki weyn ay ka qabaan kuraasta Haweenka ee kasoo bixi karta Magaalada Kismaayo.
Ayadoo dhanka kale sheegtay inay Kalsooni ku qabaan in Madaxweynaha Maamulka Jubaland oo Tixgalin doono Codsigooda ku aadan in si aad ah loo ilaaliyo qoondada haweenka
Waxaa intaa ku dartay in musharrixiinta kasoo baxday Jubbaland ay isha ku hayeen guddigooda, waxaana ay ka dalbatay Madaxweynaha Jubbaland in uu kasoo baxo kaalintiisa ku aadan xaqiijinta qoondada haweenka.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa dhowr jeer waxay walaac ka muujiyeen in la ilaaliyo xaqiijinta qoondada haweenka, taas oo keentay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu Magacaabo guddi ka Shaqeeya u ololeynta iyo xaqiijinta qoondada haweenka ugu yaraan 30 boqolkiiba ee labada aqal.
Previous articleDiiwangelinta musharraxiinta aqalka sare oo Kismaanyo ka bilaabaneysa
Next articleXayiraadda COVID19 ee Australia oo la kordhiyay